BornaChampion (2021) | MM Movie Store
Action Drama Sport Uncategorized
IMDb Rating ကတော့ မထှကျလာသေးပါဘူး . အစောဆုံးတငျပေးလိုကျပါတယျ။ အခုဒီကားလေးက ဒီနှဈထဲမှာပဲထှကျရှိထားတဲ့ Action/ Drama/ Sport စတိုငျ ဇာတျကားကောငျးလေးပါ။
ဘရာဇီးကိုယျခံပညာတဈမြိုးဖွဈတဲ့ ဂြူဂဈြဆုမှာထူးခြှနျတဲ့ မဈကီကယျလီ…….ဇှဲ၊ သတ်တိရှိပွီး အနိုငျမခံအရှုံး မပေးတဲ့ ကယျလီ ၊ ခငျပှနျးသညျကောငျးတဈယောကျ ဖခငျကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ကယျလီ၊ထိုးသတျပှဲတှကေို မကွိုကျတဲ့ သူ့ရဲ့ ခဈြတဲ့ဇနီးသညျကိုဖွောငျးဖွပွီး တရားဝငျမဖွဈသေးတဲ့ MMAပှဲကိုဝငျပွိုငျခဲ့တဲ့ကယျလီ………
သူ့ဘဝမှာမရခဲ့တဲ့အရာကို မိသားစုကိုပေးခငျြခဲ့တဲ့ကယျလီ၊ သားဖွဈသူကိုသိပျခဈြပွီး သားဖွဈသူကို သူ့လိုမဖွဈစခေငျြခဲ့တဲ့ ကယျလီဆိုတဲ့ MMAဖိုကျတာကွီးအကွောငျးကို ရသစုံနဲ့ခံစားကွညျ့ရှုရငျးဝဖေနျသုံးသပျ ကွညျ့ကွပါအုံးလို့…………..
IMDb Rating ကတော့ မထွက်လာသေးပါဘူး . အစောဆုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုဒီကားလေးက ဒီနှစ်ထဲမှာပဲထွက်ရှိထားတဲ့ Action/ Drama/ Sport စတိုင် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
ဘရာဇီးကိုယ်ခံပညာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဂျူဂျစ်ဆုမှာထူးချွန်တဲ့ မစ်ကီကယ်လီ…….ဇွဲ၊ သတ္တိရှိပြီး အနိုင်မခံအရှုံး မပေးတဲ့ ကယ်လီ ၊ ခင်ပွန်းသည်ကောင်းတစ်ယောက် ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကယ်လီ၊ထိုးသတ်ပွဲတွေကို မကြိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်တဲ့ဇနီးသည်ကိုဖြောင်းဖြပြီး တရားဝင်မဖြစ်သေးတဲ့ MMAပွဲကိုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ကယ်လီ………
သူ့ဘဝမှာမရခဲ့တဲ့အရာကို မိသားစုကိုပေးချင်ခဲ့တဲ့ကယ်လီ၊ သားဖြစ်သူကိုသိပ်ချစ်ပြီး သားဖြစ်သူကို သူ့လိုမဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ ကယ်လီဆိုတဲ့ MMAဖိုက်တာကြီးအကြောင်းကို ရသစုံနဲ့ခံစားကြည့်ရှုရင်းဝေဖန်သုံးသပ် ကြည့်ကြပါအုံးလို့…………..